Akafuridzirwa Pakazosvika Lowercase King — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Akafuridzirwa Pakazosvika Lowercase King
Nhasi isu vanopemberera nhaka kowokutanga mutungamiriri Civil Rights sangano, Dr. Martin Luther King Jr. Ishe akashandisa murume uyu kuti afuridzire rudzi, uye kufamba vanhu vakananga wakanyatsojeka. Pachine basa kuitwa, asi mupiro wake harwutsananguriki. No gamba akakwana, uye Dr. King ndozvakaitikawo, asi Ndinoyemura naye munzira dzakawanda uye ndiri kunofuridzirwa nhaka yake. Heano zvinhu zvitatu pamusoro hwake zvinokurudzira ini.
1. Passion nokuti Justice
Dr. King kusemeswa nokusaruramisira yakanga kwakazara munyika yedu, uye akatsaurira upenyu hwake kuna kurirwisa. MuBhaibheri, akaona chiratidzo chaMwari nokuda kwenyika yake, Akaona vaporofita vanodana kuti mugumo kudzvinyirira, uye iye waiva wakazadzwa kuona kuti kururamisira chikaitika. Ndinoyemura chido ichi kururamisira, munyengetere Mwari aizoramba vakaicheka mumwoyo mangu. Ndinoda atsigire vakadzvinyirirwa uye kuparidza Good News kuti tariro.
Pasinei youthfulness ake, Dr. King ouprofita kutaura uye nekristaro zvakaratidzwa pachena kwakaita kubuda sezvo mutungamiri sangano. Haana kugara shure uye kugunun'una, iye akawedzera uye akatungamirira. Akanga pachena pane akafunga kwaizobatsira vanhu vatema kuenderera mberi, uye akatungamirira vamwe kuti murayiridzo. Izvi zvakaguma vasiri chisimba nemishonga kuti zvakabatsira kushandura United States nokusingaperi. Tose tinogona kudzidza kubva yeutungamiri ichi. Vision chinokosha bedzi kana zviri akaroora utungamiri. utungamiriri hwake akabatsira zvakaratidzwa chikaitika.
Ehe saizvozvo, kurwa kwake haana akasangana kunyemwerera uye kumbundirana. Akaisa upenyu hwake pangozi nguva dzose kwaakaenda, akataura, kana akaramba. Aiziva zvaakanga achiita aiva nengozi, asi aiva noushingi kuisa upenyu hwake pamusoro mutsetse vanhu vake. The kushorwa akatarisana haana kudzikatidza pezvaakaratidzwa, kana zvichideredza utungamiriri hwake. It Akayeuchidza chete naye nei akanga achirwa. Ndinonamata kuti dai Ishe kushanda Mandiri isingachinji ushingi kuti anomirira hwake uye anorwa kubwinya kwake.
Ndinovimba uri kunofuridzirwa muenzaniso wake uyewo, uye ndinovimba zvauchasangana kubatana ini mukurumbidza Mwari nokuda kwezvaakaita kuburikidza Dr. King.
Pstan26 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:28 ndiri • pindura
Vanhu vakawanda vakafirwa shoko rake, Farai haina akarasika pamusoro pako Super Duper
nokuti rudo Nigeria • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:29 ndiri • pindura
Ake upenyu Zvechokwadi kwave mwero, Ndakashandisa oppurtunity ichi kukumbira kuti tinyengeterere Nigeria, kunyange sezvo isu kuti chiyamuro yedu kurutivi kurwira Nigeria yamaroto dzedu, unofanira nokukurumidza kuva chokwadi
Tamiehicks • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:30 ndiri • pindura
Tatenda share'n Trip
dhani Smith • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:30 ndiri • pindura
Ndinobvumirana kuti chiratidzo pasina utungamiri parege. Zviri maiwe, nekuti ndine chokwadi paiva vanhu vanoverengeka vakanga akafanoona kudiwa kodzero dzevanhu, uye kunyange sei zvinogona kuuya pamusoro, asi nekuti vakanga vasina zveutungamiri, havana kurangarira nhasi. The chete anoenda chechi. Nekuti mumwe mutungamiri simba uye anoratidzwa mune mubvunzo zviuru inongova muoni.